Nkọwapụta --lọ ọrụ - Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.e hiwere na August 2007. Ọ bụ mba otutu elu-tech enterprise nke na-elekwasị anya na R&D nke ịchọputa ngwá. Anyị na-enye ngwa ọrụ na ọrụ nchekwa na ntụkwasị obi na nyocha gburugburu ebe obibi, nyocha nchekwa, mmụba na mmezi.
Qingdao Junray ọgụgụ isi Instrument Co., Ltd.nwere usoro R&D zuru ezu na ikike, ugbu a nwere ngalaba 8 gụnyere teknụzụ, ụlọ nyocha, igwe, imepụta ụlọ ọrụ, imepụta usoro nnwale, yana ngụkọta nke ndị ọrụ 90. Companylọ ọrụ anyị nwere ndị ọrụ mmepụta ihe zuru oke na otu njikwa njikwa njikwa, ngụkọta nke ihe karịrị ndị ọrụ 110, nke nwere ike ịkwado nke ọma na nnyefe ọ bụla nke ndị ọrụ ọ bụla.
Ihe isi azụmahịagụnyere nkpuchi, ndị na-agba mbọ ịwa ahụ, ndị na-anwale ụlọ dị ọcha, ihe nyocha HEPA na-edozi ahụ maka nchekwa nchekwa biosafety, microbe samping na analyzing instrument, aerosol generating and testing instrument. E wezụga nke ahụ, anyị na-enyekwa ihe nlele aerosol ahaziri iche na usoro nyocha bio -olọ.
Kemgbe ntiwapụ nke ọrịa COVID-19 na mbido afọ 2020, ndị ejiri aka ha mepụtara na ihe nnwale ngwa ọrụ na ngwa ngwa ngwa microbe iji nye nchebe ahụike siri ike maka ndị ọrụ ahụike na ọha na eze ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ ndị mba ọzọ, ngalaba nyochara ngwaọrụ ahụike, ụlọ ọrụ nyocha ọgwụ na ọgwụ na ngalaba ndị ọzọ. N'etiti ha,ZR-1006 nkpuchi urughuru filtration arụmọrụ na airflow eguzogide detector, ZR-1000 nkpuchi nje filtration arụmọrụ (BFE) tester buuru ndi Germany, Britain, Singapore, Indonesia na obodo ndi ozo.